जान्नुहोस् कती बर्षको उमेरमा खुल्छ तपाइको भाग्यको ताला ? – Annapurna Daily
जान्नुहोस् कती बर्षको उमेरमा खुल्छ तपाइको भाग्यको ताला ?
On Oct 25, 2021 1,887
मानिसलाई धन कमाउनको लागि अधिक परिश्रम गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर हामीलाई हाम्रो कडा परिश्रमका साथै भाग्यको पनि साथ मिल्नु पर्छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार धनलाभ हुनु तपाईंको राशिमा पनि निर्भर गर्छ। यस्तोमा आज हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि तपाईंको राशि अनुसार कति उमेरमा अधिक धन योग बन्नेछ।
कुनै पनि मानिसलाई धन कमाउनको लागि अधिक परिश्रम गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर हामीलाई हाम्रो कडा परिश्रमका साथै भाग्यको पनि साथ मिल्नु पर्छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार धनलाभ हुनु तपाईंको राशिमा पनि निर्भर गर्छ। यस्तोमा आज हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि तपाईंको राशि अनुसार कति उमेरमा अधिक धन योग बन्नेछ।
मेष राशि: मेष राशिका मानिसले आफ्नो जीवनको १९, २८, ३७ र ५५ औं वर्षमा अ अधिक धन कमाउने योग हुन्छ। सामान्यतया, यी व्यक्तिहरू आफ्नै परिश्रमबाट धन कमाउन सफल हुन्छन्। वृष राशि: यस राशिका व्यक्तिहरूले कडा परिश्रम गरेर मात्र धन कमाउन सक्छन्। वृष राशिका मानिसको २९, ३८ र ५६ औं वर्षको उमेरमा अधिक धन आउने सम्भावना व्याप्त छ। यस राशिका मानिसले आफ्नो जीवनसाथीबाट पनि धन प्राप्त गर्न सक्छन्।
मिथुन राशि: मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको उमेरको २७,३६, ४५ र ५७ औं वर्षमा अधिक धन प्राप्त गर्ने योग हुन्छ। यिनीहरुले स्वयम् मेहनत गरेर र पिता पक्षबाट अधिक धन प्राप्त गर्छन्। कर्कट राशि: कर्कट राशिका मानिसले आफ्नो उमेरको २३, ३२, ३७, ४८ र ५८ औं वर्षमा अधिक धन प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस राशिका मानिसले धन प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा ससुरालीहरूबाट विशेष सहयोग प्राप्त गर्छन्।
सिंह राशि: सिंह राशिका मानिसले स्वयम् कडा मेहनत गरेर खुब धन प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। उनीहरुले आफ्नो उमेरको २८, ३२, ५० र ६८ औं वर्षमा सबैभन्दा धेरै धन कमाउन सफल हुन्छन्। कन्या राशि: यस राशिका व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा आफ्नो व्यापार व्यवासय तथा जीवनसाथी मार्फत धन प्राप्त गर्छन्। विशेष गरी १५, २४, ३३ र ४२ औं वर्षमा तपाईं विशाल धन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तुला राशि: यस राशिका मानिसले आफ्नो जीवनको १६, ३४, ४२ र ५१ औं वर्षको उमेरमा महिला पक्षबाट धन प्राप्त गर्छन्। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिका मानिसले बुबा वा काका पक्षबाट प्रशस्त मात्रमा धन प्राप्त हुने योग हुन्छ। यी मानिसले ३५, ४४, ५३, ६२ औं वर्षको उमेरमा प्रशस्त धन प्राप्त गर्ने सम्भावना छ।
धनु राशि: धनु राशिका मानिसको आफ्नो उमेरको ३६, ४५, ५४ र ६३ औं वर्षको उमेरमा अधिक धन लाभ मिल्ने योग हुन्छ। यस राशिका मानिसले आमा वा आमाको पक्षबाट फाइदा लिन सक्छन्। मकर राशि: सामान्यतया मकर राशिका मानिसले आफ्नो व्यापार व्यवासयबाट अधिक धन कमाउने सम्भावना हुन्छ। उनीहरुले उमेरको २४, ३७, ४६ र ५५ औं वर्षमा अधिक धन लाभ प्राप्त गर्ने योग रहन्छ।
कुम्भ राशि: यस राशिका मानिसले आफ्नो कडा परिश्रमका साथै भाग्यको साथ पाएर पनि अधिक धन कमाउन सफल हुन्छन्। यी मानिसले १८, २९, ४७ र ५७ औं वर्षको उमेरमा अधिक धन लाभ प्राप्त गर्ने योग हुन्छ। मीन राशि: मीन राशिका मानिसले आफ्नो उमेरको ३९, ४८ र ५७ औं वर्षमा धिक धन लाभ प्राप्त गर्नेछन्। यस राशिका मानिसको लागि सन्तान पक्ष सधैं धन लाभको मुख्य कारण बन्छन्।
यसैगरी ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशात्रका अनुसार तपाईको जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्रह र नक्षत्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने गर्दछ।
मेष राशि:मेष राशिका व्यक्ति अरुका सामु झुटो सान देखाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरु फाल्तुमा पैसा खर्च गर्नु बकवास हुने सोच राख्दछन्। मेष राशिका व्यक्ति निकै मेहनती हुने गर्दछन् र यिनीहरु आफ्नो मेहनतको कमाई सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गर्दछन्।कर्कट राशि:कर्कट राशिका व्यक्ति अधिक खर्चालु हुँदैनन् र मेहनत गरेको कमाएको पैसा संजय गर्नु पर्ने सोच राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु फाल्तु खर्च गर्दा आफूले मेहनत गरेको सम्झने गर्दछन्।
यस राशिका मानिस निकै समझदार हुने गर्दछन् र पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सोच विचार गरेर मात्र गर्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा कन्जूस गर्ने गर्दछन् र पैसा बचत गरेर राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा पैसा जोड्नका लागि केही कठिनाई समेत सहन गर्ने गर्दछन्।कन्या राशि:ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कन्या राशिका मानिस सबैभन्दा बढी कन्जूस हुने गर्दछन्। फाल्तु मात्र हैन आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्न पनि यिनीहरु लोभ गर्ने गर्दछन्। कन्या राशिका मानिस लजालु स्वभावका हुने गर्दछन्। तर पनि यिनीहरु भित्र अनजानमा कन्जूसको भावना पैदा हुने गर्दछ।
वृश्चिक राशि:सामान्य लाइफमा धेरै भरोसा गर्ने वृश्चिक राशिका व्यक्तिको स्वभाव हुने गर्दछ। साथै कम पैसा खर्च गर्ने यिनीहरुको स्वभाव हुने गर्दछ। यिनीहरु आफै पैसा खर्च गर्दैनन् र परिवार तथा पार्टनरले पैसा खर्च गर्दा रिसाउने गर्दछन्।